ဖောက်ပြန်ပျက်စီးရာကာလ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်း | Fasting and Prayer inaTime of Apostasy | Real Conversion
ဇူလိုင်လ ( ၂၆ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
ယခုတွင် ရှင်လုကာ အခန်းကြီး ၄၊ အပိုဒ်ငယ် ၁၈- ၂၁ ကို ဖတ်ရှုလေ့လာကြပါစို့။ လွန်ခဲ့သောမိနစ်က မစ္စတာ Prudhomme ဖတ်ကြားခဲ့သောကျမ်းပိုဒ်များကို ပြန်၍ ဖတ်ဆိုခြင်း လည်းဖြစ်ပါသည်။ လုကာ ၄း ၁၈- ၂၁ သည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၀၇၇ က ဖြစ်သည်။
"ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌ တည်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ ငါ့ကိုဘိသိတ်ပေးတော်မူပြီ။ ကြေမွသောသူ တို့၏အနာကို ပျောက်စေခြင်းငှါ၄င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိ သော သူတို့အား လွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် မျက်စိကန်သောသူတို့ အား မျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ညှဉ်းဆဲခံရ သောသူတို့ကို ကယ်မစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ထာဝရဘုရား၏ မင်္ဂလာနှစ် ကာလကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ၄င်း ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီလားဟု လာသတည်း။ ယေရှုကလည်း၊ ယနေ့ပင် ဤကျမ်းစာချက်သည် သင်တို့ကြားသည်အတိုင်း ပြည့်စုံလေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။" (လုကာ ၄း ၁၈- ၂၁ )
ယေရှုသည် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဟေရှာယ ၆၁း ၁၊ ၂ က ဖတ်ရှုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ရှုသောအခါ ၄င်းတို့သည် သူ၌ပြည့်စုံတော်မူကြောင်းကိုလည်း ဆိုထား သည်။ သူသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောရန် ဘိသိတ်ခံနေရသူဖြစ်ကြောင်းဆိုထားသည်။ နှလုံးကြေကွဲသူတို့၏အနာကိုစည်းပေးရန် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ ချုပ်နှောင်ခံရသူတို့၏လွှတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မျက်စိမမြင်သောသူတို့ ပြန်၍မြင်စေခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်း ဟောပြောခြင်းငှါ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ သောသူဖြစ်သည်။ သူသည် ချုပ်နှောင်ခံနေရသူများနှင့်ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသူများအား လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းပေးရန် ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။
သူသည် ထိုသို့သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းကြောင့် အမုန်းခံနေရသည်။ ထိုသို့အမုန်းအ ငြိုးထားသူတို့မှာ မိမိနေရင်းမြို့ နာဇရက်နီးနားကလူများနှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပါ သည်။ သူတို့က "ဤသူသည် ယောသပ်၏သား မဟုတ်ပေဘူးလား" ဟုဆိုကြသည်။ (လုကာ ၄း ၂၂ ) "တရာဇရပ်၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည် ထိုစကားတော်ကို ကြားသောအခါ ပြင်းစွာအ မျက်ထွက်သည်နှင့်" ဟုဆိုထားပါသည်။ ( လုကာ ၄း ၂၈ ) သူတို့သည် ထိုင်ရာက မတ်တပ်ထ လျက် မြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်တော်မူ၏။ လူများတို့သည် သူ့ကို ကမ်းပါးစောက်ဆီသို့ တွန်းပို့ခဲ့ကြ သည်။ သူတို့က သေသည့်တိုင်အောင် တွန်းထုတ်ချင်နေကြပါသည်။ "ကိုယ်တော်သည် သူတို့ အလယ်၌ရှောက်၍ ကြွသွားတော်မူ၏။" (လုကာ ၄း ၃၀ ) မဿဲဟင်နရီက သူတို့ကို မျက်စိ ကန်းစေသည် သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပြည့်ဝစေခြင်း စသဖြင့် တစ်ခုခုဖြစ်နိူင်ပါသည်။ (လု ကာ ၄း ၃၀ ) "သူ၏အလုပ်သည် မပြီးသေးဘဲ အစပဲ ရှိပါသေးသည်။"
ယေရှုသည် နာဇရက်မြို့ကိုထားခဲ့ပြီး ကပေရနောင်မြို့သို့သွားခဲ့သည်။ ထိုအရပ် တရားဇရပ်တွင် နတ်ဆိုးစွဲသောသူတစ်ယောက်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်ဇနီးသည် အိုင်လင်နာနှင့်ကျွနု်ပ် သည် ထိုနေရာသို့ ရောက်ခဲ့ဖူးကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က ပြိုပျက်နေသော ထိုရှေးဟောင်းတရားဇ ရပ်ကိို မြင်ခဲ့ကြသည်။ နတ်ဆိုးစွဲသူက ကျယ်သောအသံဖြင့် ဤသို့ဟောဟစ်သည်။
"နာဇရက်မြို့သား ယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ်တို့နှင့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ အကျွနု်ပ်တို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ လာသ လော။ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို အကျွနု်ပ်သိပါ ၏။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟု ကြီး သောအသံနှင့်ဟစ်ကြော်လေ၏။" (လုကာ ၄း ၃၄ )
ထိုအပြင် ယေရှုက "တိတ်ဆိတ်စွာနေလော့။ ထိုသူအထဲက ထွက်သွားလော့" ဟု ဆိုသည်။ နတ်ဆိုးသည် ထိုလူကို တောက်လောင်စေပြီး ထွက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအမှုအရာကို မြင်တွေ့ သောလူတို့သည် အံ့သြတွေဝေလျက်ရှိကြသည်။ သူတို့က "ဤစကားသည် အဘယ်သို့သော စကားနည်း။ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို အာဏာတန်ခိုးနှင့်မှာထား၍ သူတို့သည် ထွက်သွားကြ သည်" ဟုဆိုကြ၏။ "သိတင်းတော်သည်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့၌ နှံ့ပြားကျော်စောလေ ၏။" ( လုကာ ၄း ၃၇ )
ထို့နောက် ယေရှုသည် တရားဇရပ်မှထွက်ခွါပြီး ပေတရုနေထိုင်ရာအမ်သို့သွားလေ သည်။ အိုင်လင်နာနှင့်ကျွနု်ပ်သည် ထိုအရပ်သို့ရောက်သည့်အချိန်တွင် ပေတရုနေထိုင်ရာအိမ် သည် တရားဇရပ်နှင့်အဘယ်မျှလောက်နီးသည်ကို ကြည့်ရှုရန် ကျွနု်ပ်ကို တုန်လှုပ်စေသည်။ ပေတရု၏အိမ်သည် တရားဇရပ်၏အခြားလမ်းတစ်ဘက် ခြေလှမ်းအနည်းငယ်သာ သွားရပါ သည်။ သူတို့သည် ပေတရု၏အိမ်ကို ပြန်လည်တူးဖော်ကြပြီး ထိုအိမ်၏အုတ်မြစ်ကို ယနေ့တွင် သင်တို့မြင်တွေ့နိူင်သည်။ ပေတရု၏ ယောက္ခမသည် အပူတက်နေသဖြင့် အိမ်တွင် နေသည်။ ယေရှုက ဖျားနာခြင်းကို နှင်ထုတ်ပြီး ထွက်သွားခဲ့သည်။ နေဝင်ပြီးနောက်တွင် နတ်ဆိုးစွဲသော သူတို့နှင့်နာမကျန်းသောသူတို့ကို လူတို့က ခေါ်ဆောင်လာသည်။ သူတို့အပေါ်သို့ ယေရှုက လက်ကို တင်တော်မူသည်။ လူတိုင်းသည် အနာငြိမ်းခြင်းကို ရရှိခံစားကြရသည်။ နတ်ဆိုးတို့ သည်၊ " သင်သည် အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော် ခရစ်တော်ပေ တည်း" ဟုဆို လျက် အော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားသည်။ အံ့ဘွယ်အဖြစ်အပျက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွနု်ပ်ဖတ်ရသည်ကို နှစ်သက်လှပါသည်။
စကားလုံးတိုင်းကို နှလုံးသားစာမျက်နှာတွင် ရေးလို့ထား။
("ယေရှုအကြောင်းပြောပြပါ၊" Fanny J. Crosby ၁၈၂၀-၁၉၁၅ ရေးစပ်သည်။)
ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်သွားပြီးနောက်တွင်လည်း ပုံပြင်သည်ဆက် လက်သွားနေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ဆင်းသက်လာသည့် ခရစ် တော်၏တန်ခိုးတော်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါသည်။ ၄င်းသည် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယရာစုရှိအ သင်းတော်များဆီသို့လည်း ကူးစက်သွားခဲ့သည်။ "တတိယကမ္ဘာ" ၏ များစွာသောအပိုင်းတို့ကို လည်း ကူးစက်ပြန့်နှံသွားပါသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် "အသိအမှတ်မပြုသည့်အသင်းတော်များတွင် စောင့်ရှောက်နေကြသည်။
သို့ရာတွင် အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ နှင့်အနောက်တိုင်းနိူင်ငံရှိ ကျွနု််ပ်တို့၏အသင်းတော် များတွင် တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်သည် ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်တွင် အနောက်တိုင်းကမ္ဘာ၌ အစပြုခဲ့သည်။ ၁၈၃၀ ခုနှစ်လောက်က စတင်ပြီး အရာခပ်သိမ်းသည် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က ယနေ့ အသင်းတော်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောပြဿနာအားလုံးနီးပါးသည် ၁၉ ရာစု အလယ်ပိုင်း ကို ပြန် သွားနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအချက်တွင် သမ္မာကျမ်းစာဝေဖန်ခြင်း၊ သိနနှင့်ဗက်တိ ကင်န စာမူအရောဆိုးသည့် ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၊ Finney ၏ "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ"၊ မော်မွန်း၊ ယေ ဟောဝါ သက်သေများ၊ ကပ်ဗဲလ်လီတီး၊ သတ္တမဥပုတ်အသင်း၊ အင်စတင်းနှစ်ခြင်း၊ ဒေါ်နီဇမ်၊ ဤအရာ အားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်အတွင်း ခုန်ထွက်လာသည်။ ၄င်းတို့သည် အလွန်ပင် ရှုပ်ထွေးပြီး စာတန်၏သဘောတရားသက်ရောက်သည်။ ထို့နောက် ဥရောပတစ်ခု လုံးကို ထုတ်ပစ်သည့် ပထမကမ္ဘာစစ်ရှိသည်။ အသင်းတော်များသည် မိမိကိုယ်ကို ထုတ်ပစ် သည်။ မည်သည့်အချိန်၌မျှ ကျော်လွန်မရပါ။ လူသည် တကယ်တော့ ကောင်းပါသည်ဟူ၍လည်း ကောင်း၊ လူသည် အထက်သို့ချီတက်နေသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အံ့သြဘွယ်ရာကောင်း သည့်ကမ္ဘာထဲတွင် ပါဝင်နေကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း လီဗရယ်များ က အသင်းတော်များကို ဆိုကြသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်က ထိုအယူအဆကို ရေထဲက ရှင်းလင်း ထားလိုက်သည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာက လူသည်ဆိုးသွင်းသည်ဟု ဆိုသည်ကို လူတို့က မသိကြ ပါ။ လီဗရယ်များက လူတို့ ကို လမ်းမှားသို့ဦးဆောင်နေသည်ကိုလည်း မသိကြပါ။ ခရစ်ယာန် ဘာသာသည် အခြေအမြစ် မရှိဟုသာ ထင်ကြသည်။ ပုံပြင်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝကျော်လွှားမရနိူင်ပါ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်လည်းဖြစ်လာသည်။ ထိုမျိုးဆက်မှ မည်မျှသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့က "Auschwitz ကြောင့် ဘုရား သခင်ကို မယုံကြည်နိူင်ပါ၊ သို့မဟုတ် Hiroshima ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်နိူင်ပါ" ဟုသာ ဆိုကြသည်။ လူတို့၏လုံးဝပျက် စီးခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန် သင်ချက် ကို သင်မပေးကြပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဘိုးဘေး တို့သည် အသင်းတော်များမှ လွှဲရှောင်သွားခဲ့ကြရ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၏မျိုး ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ယခု ကျွနု်ပ်တို့သည် ၄င်းတို့၏မျိုးဆက်ဖြစ်သော သင်နှင့်ဆုံ တွေ့ရသည်။
ဖန်တမင်တယ်သမားများသည် ၄င်းတို့၏ဘဝအသက်တာများအတွက် လီဗရယ်များ နှင့်တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ သူတို့သည် လူကောင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် လေးစားထိုက် သောသူများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် "ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ" သည် မယုံကြည်သူ ထောင် ပေါင်းများစွာကို အသင်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ကို သတိမပြုမိကြပေ။ ထိုအရာက နယူး ဧဝံဂေလိအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ပြီး ၄င်းက Rob Bell ကဲ့သို့သော Fuller Theological Seminary မှ လူများကို မွေးထုတ်ပေးသည်။ ( Love Wins - စကြာဝဠာဝါဒ) လူတို့က အသစ် ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အသစ်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါ။ Bell ကဲ့သို့သောလူများက ယူနီတေး ရီးယန်းများ၏မျိုးစေ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ Bell သည် တကယ်တော့ ယူနီတေးရီးယန်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Fuller Seminary သည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိ ကိုယ်ကို "ဧဝံဂေလိများ" ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြပြီး မယုံကြည်သူများပတ်လည်တွင် ပြေးလွှား နေသည့် ယူနီတေးရီးယန်းသစ်များဖြစ်သည်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်က တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်သည် ဆယ့်နှစ်လအတွင်း ၄င်းတို့၏လူဦးရေ ၂၀၀၀၀၀ ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ၁၂ လအတွင်း တောင်းပိုင်းနှစ်ခြင်းအဖွဲချုပ်ကလူ သန်းလေးပုံးတစ်ပုံသည် ထွက်သွားခဲ့ကြသည်။ မယုံနိူင်စရာပါပဲ။ သူတို့က အိုင်အက်စ်အိုင် အက်စ် ကိုကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ ခရစ်ယာန်များ ခေါ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရသည်ကို သတင်း ထဲတွင် တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ လင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုကို ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ အိုဗားမားကို ကြောက်နေကြသည်။ အရာအားလုံးကို ကြောက် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပုန်းရှောင်ရန် အသင်းတော်မှ ထွက်သွားကြသည်။ စိတ်နှလုံးက ဖြစ်လာ သည့်အရာသာဖြစ်သည်။ ၁၂လအတွင်း၌သာ လူပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ သည် အသင်းတော်ကို စွန့် ပစ်ထားခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုအရာမှာ ကျွနု်ပ်တို့လာရာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ကျွနု််ပ်တို့သည် မြို့တွင်း၊ လောအိန်ဂျယ်လ်မြို့ထဲ၊ ဟောလိဝုဒ်ကနေ ၁၅ မိနစ်၊ အနောက်တိုင်းကမ္ဘာ၏ချိုင်း ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အား မယုံကြည်သူများကို ထုဆစ်သည့်အသင်းတော်ဟု ယူဆကြသည်။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောအိမ်ထောင်မှ ကလေးကောလိပ်ကျောင်းခွဲဟု သင်ယူ ဆထားသည့်အရာက အသင်းတော်ဖြစ်စေနိူင်သည်ဟု ထင်ပါသလား။ မဖြစ်နိူင်သောအရာပါ။ သို့သော် ထိုထက်သာလွန်၍ပင် ကျွနု်ပ်တို့သည် နိူးထမှုအတွက် ဆုတောင်းနေကြသည်။ ဟ ဟ ဟား။ မဖြစ်နိူင်သော အိပ်မက်သာဖြစ်သည်နော်။ လူသားအနေဖြင့်ပြောရလျှင် မဖြစ်နိူင်ဟု ဆိုရာအရပ်တွင် ဘုရားသခင်တည်ရှိတော်မူသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
"ဤအမှုကို လူမတတ်နိူင်သော်လည်း ဘုရားသခင်မတတ်နိူင်သည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တတ်နိူင် တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။" (မာကု ၁ဝး ၂၇ )
ပထမရာစုတွင် မည်သည့်အရေးကြီးအရာမျှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ယေရှုက ဟေရှာယ ကို ကိုးကားလျက် "ယနေ့ပင် ကျမ်းစာပြည့်စုံပြီ" (လုကာ ၄း ၂၁ ) ဟုဆိုသည်။ သူတို့က ခရစ် တော်ကို အရူးဟု ထင်ကြသည်။ သူ့ကို ချက်ချင်းပင် သတ်လိုကြသည်။ "သို့သော် ယေရှုသည် သူတို့အလယ်တွင် လျှောက်သွားတော်မူသည်။" (လုကာ ၄း ၃၀ )
သူသည် ထိုတရားဇရပ်ထဲကထွက်၍ တစ်ခုပြီးတစ်ခု နိမိ်တ်လက္ခဏာလုပ်ဆောင်ကြ သည်။ နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်အတွင်းတွင် သူ၏နောက်လိုက်များသည် ရောမအင်ပါယာအတွင်း နေရာတိုင်းတွင် ရှိတော်မူသည်။ သူတို့သည် သက်သာလောနိတ်မြို့သို့ရောက်ကြသောအခါ ထိုမြို့ကို အုပ်သောသူက "လောကီနိုင်ငံကိုမှောက်လှန်သော ဤသူတို့သည် ဤအရပ်တိုင် အောင်ရောက်ကြပါပြီ" ဟုဆိုသည်။ (တမန် ၁ရး ၆ )
အရေးကြီးသောအရာသည် အမှန်တကယ် လုံးဝမပြောင်းလဲပါ။ လူတို့သည် ပုန်ကန် သူများ၊ မယုံကြည်သူများသာ ဖြစ်လျက်နေသေးသည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း အမြဲတမ်း ပလ္လင်တော်တွင်ရှိနေသည်၊ တန်ခိုးရှိလျက်နေသည်၊ အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်လျက်နေသေး သည်။ ခရစ်တော်သည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ တူညီနေသည်။ သူသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသော သခင်ဖြစ်သည်။
သူသာ သခင်၊ သူသာ အရှင်၊
("သူသည် သခင်ဖြစ်သည်"၊ Marvin V. Frey၊ ၁၉၁၈- ၁၉၉၂ )
"သင်သည် သခင်ဖြစ်သည်" ဟု သီဆိုလိုက်ပါ။
ဘုရားသခင်၊ ခရစ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တို့သည် စကြာဝဠာထဲက အကြီးမား ဆုံးသောတန်ခိုးကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကသို့ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးကို အတိတ်ကကဲ့သို့ပင် ယနေ့တွင်လည်း စေလွှတ်နိူင်သည်ကို ကျွနု်ပ် သိသည်။ ကျွနု်ပ်တုိ့ မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၌ တန်ခိုးမရှိ။ သို့သော် ကျမ်းစာက "တန်ခိုး တော်သည် ကိုယ်တော်၌ရှိ၏"(ဆာလံ ၆၂း ၁၁) ဟုဆိုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၄င်း၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို ကျွနု်ပ်တို့အပေါ်သွန်းလောင်းတော်မူသောအခါ ကြီးမားသောအခါ၊ တန်ခိုးကြီး သောအရာသည် ဖြစ်ပျက်လာသည်။ စကော့တလန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဂျွန်နော့စ်က "ဘုရားသခင်သည် သာမန်လူတန်းစားတို့အား ၄င်း၏ဝိညာဉ်တော်ကို ကြွယ်ဝစွာသွန်းလောင်း ပေးတော်မူသောကြောင့်" အသွေးစွန်းသော မာတုရတို့၏ဓါးမှ စကော့တလန်သည် ကယ်တင် တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်။ ( ဂျွန်နော့စ်၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ အတွဲ ၁၊ ၁၉၄၆၊စာ-၁၀၁)
သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းသောအခါ၊ ကျွနု်ပ်တို့အလယ်၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဘုရားသခင်သွန်းလောင်းတော်မူရန် ဆုတောင်းပေးပါ။ ဧဝံဂေ လိလုပ်ငန်းသို့သွားသည့်အချိန်တွင် အလုပ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်း ရန် ဆုတောင်းပေးပါ။ ကားမောင်းနေလျှင်၊ ကျွနု်ပ်တို့အလုပ်တွင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းပေးရန် ဆုတောင်းပေးပါ။ တရားဟောဆရာကြီး ချားလ်ဆိုင်မွန်က "ပြောင်းလဲ ခြင်းအလုပ်သည် ဘုရားသခင်က သာမန်ထက်ကျော်လွန်၍ သင်တို့အပေါ်သို့ ၀ိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းတော်မမူလျှင် သင်တို့ကြားတွင် အလွန်နှေးကွေးပေလိမ့်မည်" ဟုဆိုသည်။ (W. Carus, ချားလ်ဆိုင်မွန်၏ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ၁၈၄၇၊ စာ-၃၇၃)
ကျွနု်ပ်တို့က ဘုရားသခင်အား ၄င်း၏ဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်ရန် မလုပ်ဆောင်နိူင် သည်ကို သတိရပါ။ ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်၌ ဘုရားသခင်က သူ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်း လောင်းရန် ဆုတောင်းသည်မှာ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်လောက်ရှိသည်။ အခုထိ မသွန်းလောင်း သေးပါ။ ယခုတွင် နောက်သို့ပြန်ကြည့်သောအခါ သူအဖြေမပေးရသည့်အကြောင်းတရားကို ကျွနု်ပ်မသိပါ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့တွင် ကောင်းသည့်အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်နိူင်ကြ သည်။ ယခုခေါင်းဆောင်များသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏လူငယ်အ များစုသည်လည်း ပြောင်းလဲလာကြသည်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော် တွင် ၄င်း၏ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဤနွေရာသီတွင် လူငယ် ဆယ်ယောက် သို့မဟုတ် ဆယ့်နှစ်ယောက်လောက် အသင်းတော်သို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျက်မှတ်ထားသည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို လှန်ကြပါစို့။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမှာ Scofield Study Bible ကျမ်းစာတွင် စာမျက်နှာ ၇၆၃ ဖြစ်သည်။ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်လျက် ဖတ်ကြပါစို့။
"ငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသောအချည်း အနှောင်ကို ချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညဉ်းဆဲခံရသော သူတို့ကို လွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော။"(ဟေရှာယ ၅၈း ၆ )
အားလုံးထိုင်နိူင်ပါပြီ။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို အလွတ်ရအောင်ကြိုးစားပါ။ နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့တွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့်အခါ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဖွင့်ပြီး ဖတ်ပါ။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆ သည် ဟေရှာယ ၆၁း ၁-၂ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဘယ်မျှနီးစပ်သည်ကို သတိပြုပါ။
"ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်မှာ တည်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ၊ ငါ့ကို ဘိသိတ်ပေးတော်မူပြီ။ နှလုံးကြေကွဲ သောသူတို့၏ အနာကိုစည်းစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထား လျက် ရှိသောသူတို့အား လွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်၊ အကျဉ်းခံ လျက်ရှိသောသူတို့အား ထောင်တံခါး ဖွင့်ခြင်းအကြောင်းကို ပြစေ ခြင်းငှါ၄င်း၊ ထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်နှင့်၊ ငါတို့ဘုရားသခင်အ ပြစ်ပေးတော်မူရာနေ့ရက်ကာလကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ၄င်း၊ စိတ် မသာညဉ်းတွားသောသူတို့အား နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှါ၄င်း။" (ဟေရှာယ ၆၁း ၁- ၂ )
ဤကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါ ခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ဆု တောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏အဖြေအားဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရိုက် ( ၁၈၉၅-၁၉၈၀) က "ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို စောင့် မျှော်နေကြသည်ဖြစ်၍ စစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စိတ်နှလုံးနိမ့်ချခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးလိုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ပေးမည်။ ဘုရားသခင်က သင့်အား ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာတွင် ဆုံတွေ့တော်မူသည်တိုင်အောင် အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းပါ။" (ဆုတောင်း ခြင်း၊ တောင်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ဓါး၊ ၁၉၉၇၊ စာ- ၂၃၀၊ ၂၃၁)
ယောနသန်အက်ဝပ် ( ၁၇၀၃- ၁၇၅၈) က အမျက်တော်ထွက်သော ဘုရားသခင်၏ လက်တော်က အပြစ်သား ကို ဟောပြောရန် သုံးရက်အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ပထမ ဆုံးနိူးထမှုသည် ဤတရားဒေသနာအားဖြင့် အစပြုခဲ့သည်။ (Elmer Towns, D. Min., အစာ ရှောင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အစပြုသူများလက်စွဲ၊ Regal Publications, ၂၀၀၁၊ စာ- ၁၂၃၊ ၁၂၄)
ဒေါက်တာ မာတာလွှိုင်-ဂျူံး ( ၁၈၉၉- ၁၉၈၁ ) က "ကျွနု််ပ်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်း မေးခွန်းကို သတိပြုမည်အကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့တွင် ဖြစ်ပွါးလေ့ရှိမရှိကို အံ့သြမိသည်၊ အဓိကမှာ ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပေဘူးလား။ ဤအကြောင်းအရာအားလုံးသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ခရစ်ယာန်အတွေး အခေါ်ထဲက ထွတ်ကျသည်နှင့်တူပါသည်" ဟုဆိုထားပါသည်။ ( တောင်ပေါ်ဒေသနာကို လေ့ လာချက်၊ အပိုင်း ၂၊ Eerdmans, စာ- ၃၄ )
ကနဦးနှစ်ရာစုသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သူ ပိုလီကပ် ( ၈၀- ၁၆၇) က " အစကတည်းက ကျွနု်ပ်တို့အားပေးတော်မူသောကျမ်းစာထဲသို့ ကျွနု်ပ်တို့ပြန်သွားကြပါစို့၊ 'ဆုတောင်းခြင်းကို မျှော်ကြည့်လျက်၊' 'အစာရှောင်ခြင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားလျက်' ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်" ဟုဆို သည်။ ( ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်သို့ရေးသားသည့်စာစောင် )
စပါဂျွန် ( ၁၈၃၄-၁၈၉၂) က "ကျွနု််ပ်တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမရှိသဖြင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များစွာတွင် ကြီးမားသည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။" (စီ၊ အိချ်၊ စပါဂျွန်၊ "ရမ်းကားမှုကိစ္စတစ်ခု၊ မည်သို့ဆုံနိူင်မည်နည်း၊" ဇန်နာဝါရီလ ၁၀၊ ၁၈၆၄ )
ဒေါက်တာ အာအေတိုရီ ( ၁၈၅၆-၁၉၂၈) က ကျွနု််ပ်တို့သည် တန်ခိုးနှင့်ဆုတောင်း လျှင် အစာရှောင်ဆုတောင်းသင့်သည်" ဟုဆိုသည်။ ( ဆုတောင်းရမည့်နည်းလမ်း၊ ၂၀၀၇၊ စာ- ၃၇ )
ဂျွန်ဝယ်စလီ ( ၁၇၀၃- ၁၇၉၁) က "အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းသည့်နေ့ရက်ရှိပါသ လား။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တွင် မုန်တိုင်းထန်ပြီး ထိုအထဲတွင် သည်းခံခြင်းရှိပြီး ကျေးဇူးတော် သည် ဆင်းသက်တော်မူလိမ့်မည်။" (ဂျွန်ဝယ်စလီ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ အတွဲ ၁၀၊ ၁၈၂၇၊ စာ- ၃၄၀ )
တရုတ်ဧဝံဂေလိဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဂျွန်ဆုန်း ( ၁၉၀၁-၁၉၄၄ ) က "(လူငယ်)များ စွာတို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည်။ သခင်ဘုရားအတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသား များ၏လိုလားချက်မှာ တို့ထိခြင်းဖြစ်သည်။" ( ဂျွန်ဆုန်း၏မှတ်တမ်း၊ လေဝိက စုဆောင်းသည်၊ ကမ္ဘာဦးစာအုပ်များ၊ ၂၀၁၂၊ စာ- ၂၉၈ )
တရုတ်ပြည်သို့ ပထမဆုံးသာသနာပြုသူ Dr. James Hudson Taylor ( ၁၈၃၂- ၁၉၀၅) က " ကျွနု်ပ်သည် ရှန်ရှီတွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ဆောင် နေသည့် တရုတ်ခရစ်ယာန်များကို တွေ့ခဲ့သည်။ ၄င်းမှာ ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားသည့် ကျေးဇူးတော်နည်းလမ်းပေတည်း။ ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင် အကြီးမားဆုံးသောအဆီးအတား မှာ ကျွနု်ပ်တို့၏ခန်အားပြီးနိူင်ပြီး အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည် ဆင်းရဲချို့တဲ့သူ၊ အားနည်း သူ၊ စသဖြင့် သင်ယူလေ့လာနေရသည်။" ( ခရစ်ယာန်ကိုးကားချက်၏ စွယ်စုံကျမ်း သစ်၊ Baker Books, ၂၀၀၀၊ စာ- ၃၆၀ )
ဒေါက်တာ တိမောသေ လင်း ( ၁၉၁၁- ၂၀၀၉ ) က "ကျွနု်ပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာသတိ ပြုမိရမည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မကြာခဏ ဖွင့် ထားလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းမှာ ကျွနု်ပ်၏အတွေ့အကြုံမှ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။" ( အသင်း တော်ကြီးထွားခြင်းလှို့ဝှက်ချက်၊ ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ၁၉၉၂၊ စာ- ၂၃ )
ကျွနု်ပ်တို့သည် လာမည့်စနေနေ့တွင် နောက်ထပ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းရှိမည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အချို့သောအချက်ပေးလိုသည်။
၁။ သင်၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်ပါ။ (အဖြစ်နိူင်ဆုံး ) သင်သည် အစာရှောင်ဆုတောင်နေသည်ကို လှည့် ပတ်ပြောဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။
၄။	ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူနေထိုင်ဖို့ လူ ၁၀ ယောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်များ သည့်အရေအတွက်ကို ပေးရန် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းပါ။
၅။	မပြောင်းလဲသေးသည့် ကျွနု်ပ်တို့၏လူငယ်များ၏ ပြောင်းလဲခြင်းအ တွက် ဆုတောင်းပါ။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆ တွင် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းပါ။
၆။	ယနေ့ပထမဆုံး လေ့လာသူအဖြစ်ရောက်လာသူများ ( တနင်္ဂနွေ) နောက်တကြိမ်ရောက်လာနိူင်ရန် ဆုတောင်းပါ။ ဖြစ်နိူင်ရင် နာမည် ခေါ်၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
၇။	နောက်တပတ် တနင်္ဂနွေ မနက်နှင့်ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားရမည့် အရာကို ဘုရားသခင်ပြသရန် ဆုတောင်းပါ။
၈။	ရေများစွာ သောက်သုံးပါ။ တစ်နာရီလျှင် တစ်ခွက်စီသောက်ပါ။ နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည် သောက်လေ့ရှိလျှင် အစပိုင်းတွင် မတ်ခွက် ကြီးဖြင့် ကော်ဖီသောက်သုံးနိူင်ပါသည်။ နူးညံ့သောအရည်၊ ပါ၀ါအ ရည် စသည်တို့ကို မသောက်သုံးပါနှင့်။ .
၉။ သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယဖြစ်လျှင် အစာမရှောင်မှီ ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။ (ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်တွင်ရှိကြသည့် Dr. Kreighton Chan သို့မဟုတ် Dr. Judith Cagan ကို ပြသနိူင်သည်) အရေးကြီးသည့်အခြေအနေဖြစ်သည့် ဆီးချိုရောဂါ သို့မဟုတ် သွေး တိုးရှိလျှင် အစာမရှောင်ပါနှင့်။ ဤအချက်တွေကို ဆုတောင်းရန်သာ စနေနေ့ကို အသုံးပြုပါ။
၁၀။	အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို သောကြာနေ့ ညနေစာ စားပြီးသည့် အချိန်တွင် အစပြုပါ။ စနေနေ့ ညနေ ၅း ၃၀ နာရီအချိန်တွင် အသင်း တော်၌ အစာစားသည်တိုင်အောင် သောကြာနေ့ ညစာ စားသည့်အ ချိန်မှစ၍ အဘယ်အရာကိုမျှ မစားပါနှင့်။
၁၁။	ဆုတောင်းရန် အရေးအကြီးဆုံးသောအရာမှာ ကျွနု်ပ်တို့အသင်း တော်ရှိလူငယ်များပျောက်လဲလာရန် ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ ထိုအ ပြင် ယနေ့အချိန်တွင် အသင်းတော်၌ရောက်ရှိလာသောလူငယ်များ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ ရေရှည်နေထိုင်သောသူများဖြစ်ရန် ဆုတောင်းပါ။
ယခုတွင် မပြောင်းလဲသေးသောသင်တို့အဖို့ စကားအနည်းငယ် ပြောချင်ပါသည်။ သင် ၏အပြစ်အတွက် အကြွေးကိုပေးဆပ်ရန် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်မဟုတ်။ ယေရှုသည် ရုပ်ခန္ဓာဖြင့်ထ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သင်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးနိူင်ရန် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ယေရှုသည် တတိယကောင်းကင်ဘုံရှိ ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်သို့ ပြန် လည်တက်ကြွတော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းသည် သူ့ထံသို့ရောက်လာနိူင်သည်။ သူသည် သင့်အား အပြစ်နှင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းမှကယ်နှုတ်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင် ကောင်း ကြီးပေးပါစေ။ အာမင်။ ဒေါက်တာ Chan ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
သငသြညြ Dr. Hymers ၏တရားဒသနောကို အငတြာနကပြေါတြှငြ
www.realconversion.com သို့မဟုတြ www.rlhsermons.com. ဖှငြ့ အပတစြဉတြိုငြး ကှညြ့ရှုနိူငပြါသညြ။ “တရားဒသနောစာမူ” ကိုနှိပပြါ။
သငသြညြ Dr. Hymers အား အီးမေးလြ rlhymersjr@sbcglobal.net ဖှငြ့လညြး ဆကသြှယနြိူငပြါသညြ။ သို့မဟုတြ စာအားဖှငြ့လညြး ဆကသြှယနြိူငပြါသညြ။
P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. ဖုနြး (၈၁၈)၃၅၂-၀၄၅၂
ဤတရားဒသနောစာမူမွားကိုဤတရားဒေသနာစာမူများကို ကူးယူ၍မရပါ။ သင်သည် Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲအသုံးပြုနိူင်သည်။ သို့သော်
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုကာ ၄း ၁၆- ၂၁
"ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်၊ လာပါ၊ ပြင်ဆင်တော်မူသည်။"၊ (John Newton ၁၇၂၅-၁၈၀၇) ရေးစပ်သည်။